Zvinoreva Mazita »Zviri pamutemo duramazwi rezvinoreva uye mavambo
Mazita echirungu nemazita
Mazita emusikana wemubhaibheri
Mazita evana anozivikanwa
Mazita emuBhaibheri evakomana
Mazita embwa akakurumbira
Pitbull mazita imbwa
Mazita embwa diki
Mazita ekati eIjipita
Mazita emakati anozivikanwa
Zvinoreva Mazita - Duramazwi Repamutemo reMazita
Zvakadaro hauzive iyo zvinoreva zita rako? Iwe unoda kuziva here kuti zvinobva kupi uye ndezvipi zvakatangira? Kana iwe ungangoda iyo zita remwanakomana wako?
Zvisinei nechikonzero chako chekuziva zvinoreva zita, iwe uri pane rakanyanya peji peji kuti uwane icho. Vhura www.meanings-names.com tinokupa iwe duramazwi repamazita remazita nezvaanoreva uye mavambo.
Pawebhusaiti iyoyo iwe unowana akawanda mazita uye zvinoreva iwo. Iwe zvakare uchakwanisa kuziva mavambo, nhoroondo, vasande, pamwe nezvimwe zvakawanda zvimwe zvinhu. Isu zvakare tinokupa iwe runyorwa rwevanhu vane mukurumbira vane zita iro.
1 Zita rezita rinorevei?
2 AZ zita rinonyorwa
3 Chii chaunotarisira kubva kuZita Rinoreva webhusaiti?
4 Chii chaunowana mune Zvinoreva Mazita?
5 Tsvaga zvinorehwa nemazita emucheche, mukomana nemusikana, vakasununguka zvachose
6 Chii chakabva mazita?
6.1 ChiGiriki, chiLatin uye Chirungu, kwakabva mazita
7 Nei ndiri kufarira kuziva zvinoreva mazita?
7.1 Wakawira mukati meruoko rwe rudo
7.2 Hauzive here zvauchadaidza mwanakomana wako?
7.3 Kuziva zvinorehwa nezita rako iwe unozogona kuzviziva iwe zviri nani zvakanyanya
Zita rezita rinorevei?
Tine a yakakura katarogu nemazana emazita kwese kuravira. Kune mazita mazhinji muSpanish asi isu tinopawo mazita mune mimwe mitauro yakaita seChirungu, ChiFrench, ChiGerman, ChiBasque kana chiCatalan, kupa mienzaniso mishoma.
Kunyangwe iwe uchitsvaga zita remazuvano kana rimwe retsika, kana iwe uchida zita pfupi - raive rine mufashoni makore mashoma apfuura - kana iwe uchida zita rakareba, pane ino webhusaiti iwe unogona kuwana zvauri kutsvaga.
Isuwo tine iwo mazita mazita emhuka dzinovaraidza uye mhuka dzakadai semazita embwa kana mazita ekitsi. Zvinogona kutaridzika kunge zvakapusa asi kusarudza zita rechipfuwo chako kunewo matambudziko kwaro sezvo varidzi vazhinji vachida kusarudza zita remumwe wavo zvichibva pahukuru hwavo, ruvara rweganda ravo kana hunhu.
Pazasi iwe unogona kuwana runyorwa rwakakwana rwemazita akarairwa kubva kuAZ, kuti zvive nyore kwauri kuti ushandise webhu uye nekukurumidza uwane zita rauri kutsvaga. Kana iwe uchida kutsvaga ruzivo rwese nezve zvinorehwa nezita rauri kutsvaga, iwe unofanirwa kusarudza tsamba yaunoda wobva wadzvanya pairi.
AZ zita rinonyorwa
Mazita anotanga naA
Zvinoreva zita Andrés
Mazita anotanga naB
Zvinoreva zita Barbara
Mazita anotanga naC
Zvinoreva zita Cristina
Zvinoreva zita Carmen
Mazita anotanga naD
Zvinoreva zita Dylan
Zvinoreva zita rekuti Daniel
Mazita anotanga naE
Zvinoreva Esiteri kana Esteri
Mazita anotanga naF
Zvinoreva zve Fabiola
Mazita anotanga naG
Gloria kuenderana nemamwe mazita
Tora Gabriel mune dzimwe mitauro
Mazita anotanga naH
Zvinoreva zita Hugo
Mazita anotanga naI
Zvinoreva Ignacio kana Nacho
Mazita anotanga naJ
Zvinoreva zita rokutanga Jessica
Zvinoreva zita Jorge
Mazita anotanga naK
Zvinoreva zita Karina
Zvinoreva zita rokutanga Katherine
Zvinoreva zita rokutanga Karla
Mazita anotanga na L
Zvinoreva zita Lorena
Zvinoreva zita Lucia
Mazita anotanga naM
Zvinoreva zita rokutanga Monica
Mazita anotanga naN
Mazita ane Ñ
Zvinoreva Noa kana Noa
Nicole zvinoreva zita
Mazita anotanga naO
Oscar zvinoreva zita
Mazita anotanga naP
Zvinoreva zita Paulina
Mazita anotanga naR
Zvinoreva zita rokutanga Rosa
Zvinoreva zita rokutanga Raúl
Mazita anotanga na S
Zvinoreva zita Sandra
Mazita anotanga naT
Mazita anotanga naU
Mazita anotanga naV
Veronica zvinoreva zita
Zvinoreva zita rokutanga Vanessa
Zvinoreva zita Valentina
Mazita anotanga na X
Mazita anotanga na Y
Mazita anotanga naZ
Chii chaunotarisira kubva kuZita Rinoreva webhusaiti?
Pane ino peji hatisi kuzongokupa iwe iyo zvinoreva zita rako. Isu tiri webhusaiti yereferensi pamambure, inokwanisa kukupa iwe ruzivo rwakawanda pane kungoreva zvirevo zviri nyore.
Chii chaunowana mune Zvinoreva Mazita?
Kutanga. Ndeipi nyaya inosanganisirwa nezita rako? Chii chinonzi etymology? Unoziva here iyo midzi yemutauro kwainobva? Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve zita rako, zvichave zvakafanira kutanga kudzidza nezve kwayakatangira munhoroondo.
Unhu. Ungade here kuziva kuti rudzii rwehunhu iwe hwaunofanirwa kuve nahwo zvinoenderana nezita rako? Kudanana kunonyanya mukati mako here? Iwe unofanirwa kuve nehukama hwevanhu zvichibva pazita rako? Iwe uchave nerombo rakanaka murudo here? Pane ino webhusaiti unogona kuwana rumwe ruzivo nezve kwauri kuenda.
Vatsvene. Iwe unoziva here kana iri yako musande, kana iyo yeshamwari kana munhu akakosha? Pano iwe unogona kuzvijekesa uye nekuziva iro chairo zuva remusande wako.
Inozivikanwa ine zita rimwe chete. Ndeapi vanhu vane mukurumbira vanodanwa nezita rako? Ungade here kutumidza mwana wako anotevera zita rako? Kune mazita anozivikanwa kwazvo aunogona kuzvisimbisa pawo ... kushandisa zita revanhu vane mukurumbira chinhu chinogara chiri mufashoni.
Zvishoma (hypocoristic): Ndiwo mazita ayo anoshandiswa sechiratidzo chekuswedera, kunyangwe vanhu vepedyo vanowanzochishandisa kupfuura zita pacharo. Pano iwe unogona kuwana inonyanya kuzivikanwa uye yakajairika muSpanish.
Curiosities. Mazita akakodzera haangochengetedze nhoroondo yakazara kumashure kwavo, asiwo ese marudzi enigmas ayo anoita kuti tife. Vamwe vanga vari chikamu chetsika dzemadzitateguru kubva pakutanga kwenguva, ivo vanofambidzana navanamwari, nzvimbo dzenzvimbo, maguta uye vakatove kurudziro yekuumba mabasa makuru evanhu. Pane ino webhusaiti iwe zvakare unozogona kuwana ruzivo urwu nekuda kweyakakosha-nombres.com.
Zita rako rakashandurwa mune mimwe mitauro here? Iwe unoziva kana iine musiyano wechirungu? Unganyora sei muchiItaly, French ... kana kunyangwe muchiRussia? Wakafunga here kuti ungafarire zita iri nani mune mumwe mutauro? Isu tinoita kuti zvive nyore kwauri kuti iwe ugone kuziva.
Zita rako rinoenderana here neremumwe wako?. Kune mamwe mazita ane hukama nevamwe, nepo mamwe ari akasiyana zvachose. Tinofanirwa kuziva kwazvo kuti munhu anowirirana kana kuderera kudanana, kutanga hukama kana kuziva kana akatendeka zvechokwadi. Zvinogona kunge kuti munhu mumwe ari kunyanya kana kushomeka kutsamira, nepo mumwe aine imwe nzvimbo yekusavimbika, uye izvi zvinogona kuzivikanwa nezita.
Numerology. Mazita anosanganisirwa nenhamba, uye aya manhamba ane hukama nehupfumi uye mhanza. Iwe haufanirwe kukanganwa izvi ruzivo.
Heano mienzaniso yakati wandei yezvatiri kukuudza. Zvinoreva Pedro y Zvinoreva Sofia.
Tsvaga zvinorehwa nemazita emucheche, mukomana nemusikana, vakasununguka zvachose
Sezvatakatotaura, zvinokwanisika kuti iwe urikutsvaga zvinoreva zita kuti uzive kana chiri chakanyanya kukodzera kumwana wedu wenguva yemberi. Tichave tichifarira kwazvo kuwana ruzivo rwakawanda sezvazvinogona kuti tizive kana chiri icho chaicho.
Tinogona kuda zita zvakanyanya, asi hatizive mabviro, midzi, uye kuti ruzivo urwu runogona kukuita kuti uchinje pfungwa dzako. Nekuve neruzivo "patafura", zvichave nyore kutora sarudzo.
Tsvaga zita rakakwana zviri nyore nekutenda kune anotevera mazita:
Mazita evana vacheche. Pano unogona kuwana mazita evacheche, anonyanya kufarirwa munyika medu uye nyika dzekunze, izvo zvazove tsika, iyo isingawanzo iyo inotibata kutarisa kubva panguva yekutanga, yemazuva ano, yekutanga, yakanyorwa….
Mavambo uye akanaka mazita evana. Kana iwe uchitoziva kuti mwana wako anozove mukomana, saka unogona kudzvanya apa uye uwane ekutanga mazita. Iwe uchawana kusarudzwa kwesarudzo dzisina kujairika, nezvazvinoreva. Isuwo tine mazita emubhaibheri evakomana y mazita anozivikanwa evana.
Akanaka musikana mazita. Uye kana iwe uchitoziva kuti uchave musikana, pano iwe unogona kuwana mazano anozokutendera iwe kuti utore yako sarudzo. Unogona kuwana mamwe kana mashoma mazita emazuvano, ane chirevo chakakosha, chisingawanzo, zvebhaibheri, nezvazvinoreva, nezvimwe.
Mazita mune mimwe mitauro. Kana iwe usingakwanise kuwana rinonakidza zita muSpanish, pamwe tinogona kuenda kune rimwe mune mumwe mutauro. Kusarudza zita mune mumwe mutauro kwakaomarara kupfuura zvarinotaridza, sezvo tingave tisingazive zvinoreva chaizvo, kana kushandurwa kune mumwe mutauro. Pano iwe unogona kuwana yakanaka runyorwa rwe Mazita echirungu nemazita, in Catalan, chinese, japanese, Chihebheru uye mune mimwe mitauro yakawanda. Nekudzvanya pane inoenderana chikamu, ese iwo anotanga kuratidzwa.
Mazita emhuka dzinovaraidza. Izvo zvakakoshawo kwazvo kuziva kuti ungasarudza sei zita rechipfuwo, kupfuura chero chinhu nekuti ndicho icho chauchazoshandisa muhupenyu hwayo hwese. Ichi chikamu chinokubatsira iwe kuti uwane Mazita embwa, tsuro, katsi, kana chero imwe mhuka yauinayo. Iwe unozokwanisa kuwana akawanda mazano ayo anotendera iwe kuti uwane zita rakaringana zvinoenderana nehunhu hweumwe wako mudiki shamwari. Isu zvakare tine echikadzi zvakaenzana kuwana iyo mazita akanakisa emabhureki y mazita ekatsi.
Chii chakabva mazita?
Ichokwadi ndechekuti hapana zita idzva rakagadzirwa. Tinogona kutaura kuti iyo huwandu hwemazita hwakagadzirwa mazhinji, makore mazhinji apfuura. Zvatinowana nhasi mutsauko wemazita aya, kunyange paine mamwe anouya kwatiri mukuzara kwawo.
Unogona kufunga kuti zvinoreva zita hazvina kukosha, asi ndizvo chaizvo. Muenzaniso wakanaka izita re Silvia, uyu anoti "Anoshamisa Mukadzi" uye ane midzi yawo muchiLatin.
ChiGiriki, chiLatin uye Chirungu, kwakabva mazita
Mazhinji emazita azvino ane chiGiriki, chiLatin kana Anglo-Saxon midzi. Pakutanga iwe haugone kuzvipa kukosha, asi muchokwadi zvinoita, uye zvakawanda. Semuenzaniso, pakati pehuwandu hwese hwezvinoreva mazita Elena ndeimwe yeanonyanya kufadza, nekuti zvinoreva "Zvinoshamisa", izwi rinobva muchiLatin.
Mumwe muenzaniso wakanaka kuti unzwisise kukosha kwezvinorehwa nemazita unowanikwa mu Zvinoreva zita rokutanga Andrés Izvi zvine midzi muchiGiriki uye zvinoreva "kushinga, kukudzwa."
Semuenzaniso wekupedzisira, iyo Zita raRicardo, zvinoreva "Mambo anokudzwa", uye midzi yawo ndeyaGerman.
Kana iwe waida kuongorora iyo Zvinoreva mazita Uri wega, hapana chimwe chaungasarudza kunze kwekutendeukira kuKorani kana kuBhaibheri, uone kuti vafamba sei nekufamba kwenguva. Zvino, kune mamwezve mazita azvino ano asingawanikwe muzvinyorwa zvekare zvakadaro. Semuenzaniso, zita re Iker pakutanga kubva kuBasque Nyika.
Kana iwe uchida kuziva iyo etymology uye nekwakabva mazita, zvinodikanwa kuti udzokere kumaholografu akadai seKoran kana iro Bhaibheri Dzvene. Nekudaro, pane mazita ari echimanjemanje, sezvo akashandiswa kekutanga nguva pfupi yadarika, saIker, iyo yakatanga kushandiswa muBasque Nyika.
Nei ndiri kufarira kuziva zvinoreva mazita?
Zvinonyanya kufadza kuziva iyo Zvinoreva zita? Chokwadi ndechekuti vanhu vazhinji vanofunga kuti aiwa, iro zita rakangodaro.
Zvino, zvakakosha zvakanyanya kupfuura zvinoita, uye kune zvikonzero zvakawanda zvinoratidza izvozvo. Pano tinodzidza zvimwe zvezvakanyanya kukosha.
Pamwe wakambozvibvunza chii chiri kushandiswa kwekunyatsoziva zvinoreva mazita… Zvino unoita mhanza sezvo vanhu vazhinji vasingawanzofunga nezvazvo muhupenyu hwavo hwese.
Wawira mu makucha zverudo
Chikonzero chikuru nei icho chinowanzo kutsvaga Zvinoreva zita Imhaka yekuti munhu mutsva apinda muhupenyu hwedu uye tinoifarira. Kuburikidza neichi chirevo tichazoda kuziva zvakawanda nezvake / iye. Tichakwanisa kuziva kuti hunhu hwako hwakaita sei uye kana tichienderana kana kwete.
Kutenda kumavambo uye zvinoreva mazita isu tinogona kuziva maitiro ekudonha zvakapenga murudo kumunhu iyeye watinoda zvakanyanya. Tichaziva kana zano ratiri kufunga richizoshanda, kana kana tikatsvaga riri nani.
Murudo chero chinhu chinoenda, uye kuziva zvakawanda nezvehunhu hwemunhu, nekuda kwezvinoreva zita, zvinogona kubatsira zvakanyanya kupfuura zvatinofunga. Iwe unogona zvakare kutiudza isu kuti hunhu hwako hwakaita sei kana kuti zvave zvakadii kumberi.
Fungidzira kuti iwe unoda kunyengedza murume uye zvinorehwa nezita rake zvinoratidza simba, kukwezva nekunyengera. Zvichida kuti, kuteerera izvi maitiro, ndiye anokunyengedza. Nekudaro, kune mamwewo mazita ayo, zvinoenderana nezvaanoreva, anogona kuratidza kuti kuoma kwekukunda kwakakwirira.
Chero zvazviri, kuziva zvinoreva zita kunobatsira iwe kuziva kuenderana kwaro.
Hauzive here zvauchadaidza mwanakomana wako?
Kutsvaga zvinoreva zita kunogona kutibatsira kuwana iro zita rakakwana remwanakomana wedu wemunguva yemberi o mwanasikana, kuve nerondedzero yemazano atinogona kuita sarudzo yedu.
Tiri kutaura nezve danho rakakosha, uye ndizvozvo mwana achabata zita iro nokusingaperiIchatsanangura hunhu hwako uye kunyangwe nzira iyo nyika iri kuzokuona iwe.
Kwete chete isu tinofanirwa kutungamirwa ne "zvinonzwika sei", asi isu tinofanirwa zvakare kudzidza mabviro, nhoroondo, etymology, midzi, pamwe nechero chipi zvacho chinoenderana. Iwe unofanirwa zvakare kuongorora kuti ndeapi mavara munyaya anga akatumidzwa zvakafanana.
Achave akashinga, akatendeseka, aine hunhu hwakasimba, anonyara, anodanana, anopinza, anofarira kushamwaridzana? Zita rakanaka chairo rinogona kuita mutsauko.
Sarudzo yakajairika kusarudza iyo zita rebhaibheri. Mupfungwa iyi, tarisa hunhu huri muBhaibheri hwakapa hupenyu kuzita iro, pamwe nezvazvinoreva.
Mukati me ino webhusaiti iwe unowana mamwe akawanda matipi ayo achakubatsira iwe kuita sarudzo.
Kuziva zvinorehwa nezita rako iwe unozogona kuzviziva iwe zviri nani zvakanyanya
Kuziva zvinorehwa nezita rako kunobatsira iwe kutora rwendo rwekuzvitsvaga-ku ziva zvakawanda nezvako, kuziva zvaunogona, zvausingakwanise, pamwe nechero humwe hunhu hwehunhu hwako.
Zvinoshamisa kuti sei vanhu vasingataure kana vachiziva zvinoreva zita rake, uye ndezvekuti ivo vanonyatsoona hunhu hwake.
Kana iwe uchiziva zvauri, unogona kuzvigamuchira nenzira iyoyo.
Pakupedzisira, Chimwe chikonzero nei uchifarira zvinoreva mazita ndezvekuti iwe ungade kuzviziva iwe pachako zviri nani. Kudzidza zvinoreva kunokusimbisa iwe mukati, isu tese tinofanira kuzvitsvaga kamwe chete muhupenyu hwedu.
Kana iwe uchikombama kukotama neshure kuti uwane zvinangwa zvako, unogona kunzwa wakasiyana kana uchienzaniswa nevamwe, sezvo pasina munhu anoisa kuyedza kwakawanda sako. Zvingaite kuti, sekureva kwezita rako, uri kutsungirira, uye kuti une hunhu husina mumwe munhu
Sezvo iwe wakasimbisa, kana ndiani achiziva Zvinoreva mazita, hauzowane imwe nzvimbo irinani pane ino webhusaiti nesecninonoreshi.com. Unogona kuve neiyi data rese mahara.
Kana paine zita ratisina pawebhusaiti yedu, tinokurudzira kuti utiratidze izvozvo kuburikidza ne chikamu chekubata cheiyo peji.
© 2022 | zvinorehwa-mazita.com: zviri pamutemo duramazwi remazita & mavambo | NaIgnacio Andújar